६०१ नम्बर क्याबिनमा प्रम ओली, पहिलो प्रत्यारोपण गर्ने भारतीय सर्जन पनि नेपालमा « Pahilo News
६०१ नम्बर क्याबिनमा प्रम ओली, पहिलो प्रत्यारोपण गर्ने भारतीय सर्जन पनि नेपालमा
प्रकाशित मिति :3March, 2020 7:43 am
काठमाडौं, २० फागुन । प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना भएका छन् । झापाकी ‘भान्जी’ समीक्षा संग्रौला ज्ञवालीको मिर्गौला प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यारोपण गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दोस्रोपटक बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदै छ । मिर्गौला दानका लागि संग्रौला पनि अस्पताल भर्ना भएकी छिन् । शिक्षण अस्पतालमा रहेको सामाजिक सेवा शाखाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली (मिर्गौला लिने) मामा र संग्रौला (मिर्गौला दान गर्ने) भान्जी हुन् । उनीहरूको नाता प्रमाणितको फायल सोमबारै शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइएको थियो ।
प्रत्यारोपणको ४८ घन्टाअघि मानसिक तयारीका लागि भर्ना हुनुपर्छ । यो अवधिमा रगत, दिसा, पिसाबलगायत जाँच गरिन्छ । सोमबार साँझै दुवैको छाती, दाँत र रगतको परीक्षण गरिएको छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणको नेतृत्व शिक्षण अस्पतालका युरोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट सर्जिकल विभागका प्रमुख प्रा.डा. उत्तमकुमार शर्मा र सोही विभागका वरिष्ठ सर्जन प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवालीले गर्नेछन् । एकले प्रधानमन्त्री र अर्काले संग्रौलाको शल्यक्रिया गर्नेछन् । प्रा.डा. ज्ञवालीको ‘ब्याक सपोर्ट’मा ओलीकै पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका भारतीय चिकित्सक प्रा.डा. अनन्तकुमार रहनेछन् । उनी नेपाल आइसकेका छन् । ओलीको ०६४ मा पहिलोपटक भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । त्यतिवेला उनलाई चितवननिवासी भाइबुहारी अञ्जना घिमिरेले मिर्गाैला दान दिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यारोपण शिक्षण अस्पतालको नियमित कार्यसूचीअनुसार गर्न लागिएको हो । हरेक हप्ताको बुधबार शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिन्छ । अस्पतालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने अप्रेसन थिएटरमा गरिनेछ । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई ६०१ नम्बर क्याबिनमा भर्ना गरिएको छ । शल्यक्रियापछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई कलेजो प्रत्यारोपण युनिटमा रहेको आइसियूमै राखिने चिकित्सकले बताएका छन् ।
उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उपचारबारे कुनै पनि सूचना बाहिर नदिने निर्णय भएको छ । मंगलबारदेखि प्रत्यारोपण टिमबाहेक अरूलाई कलेजो प्रत्यारोपण युनिटमा प्रवेशमै रोक लगाइएको छ । शल्यक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै प्रत्येक दिन विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने चिकित्सकले बताए । तर, पत्रकारसँग दोहोरो सवाल–जवाफ भने हुनेछैन ।